Xiaomi Mi 9: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah | Androidsis
Xiaomi Mi 9 hadda waa rasmi: Nooca cusub ee sumadda leh
Eder Ferreno | | Mobiles, Xiaomi
Toddobaadyo badan oo daadad badan ka dib, Xiaomi Mi 9 ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay. Nooca sare ee cusub ee sumadda Shiinaha ayaa lagu soo bandhigay munaasabad ka dhacday dalkeeda. Kahor soo bandhigideeda caalamiga ah taas ka dhici doona Axadan MWC 2019. Dhowr usbuuc ka hor a bandhigga Shiinaha 20-kii Febraayo, wax aakhirkii dhacay. Marka waan ognahay wax walba oo ku saabsan dhamaadka-sare.
Maxaan ka filan karnaa Xiaomi Mi 9? Waad ku mahadsan tahay daadinta toddobaadyadan waxaan horey u helnay faahfaahin badan oo ku saabsan taleefankan. Laga soo bilaabo kamaradeeda dambe ee seddexaad, illaa a shidma faraha wax lagu dhajiyay shaashadda iyo tilmaamo kale oo badan. Ugu dambeyntii, dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha waa rasmi.
Moodelkan nooca Shiinaha ah ayaa ah kan ugu sarreeya. Calaamad cusub oo ah in calaamaddu ay awood u leedahay inay soo saarto moodello xiisa badan oo heer sare ah. Marka waa hubaal inay noqonayso taleefan casri ah oo caan ah. Shiinaha horay ayay u jirtay, iyadoo qadar badan oo keyd ah ilaa hadda.
1 Tilmaamaha Xiaomi Mi 9
2 Xiaomi Mi 9: Dhammaan heer sare
3 Qiimaha iyo helitaanka
Tilmaamaha Xiaomi Mi 9
Qeyb ka mid ah qeexitaannada Xiaomi Mi 9 ayaa daadanayay toddobaadyadan. In kastoo hadda ay ugu dambeyn awood u yeesheen inay xaqiijiyaan. Marka waxaan horeyba u ogaanay waxa laga filan karo dhamaadka sare ee sumcadda Shiinaha. Tayada iyo waxqabadka weyn ee qaybtaada. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Faahfaahinta farsamada Xiaomi Mi 9
Tusaale Waxaan nahay 9
Nidaamka hawlgalka Android 9 Pie oo leh MIUI 10
Screen 6.39-inch Super AMOLED oo leh xalka xalka 1080 x 2280 iyo saamiga 19: 9
Gacaliye Qualcomm Snapdragon 855
RAM 6 / 8 GB
Kaydinta gudaha 128 / 256 GB
Kaamirada gadaal 48 + 16 + 12 MP oo leh apertures f / 1.8 iyo f / 1.2 PDAF iyo LED Flash
Kaamirada hore 20 MP
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 5.0 GPS USB-C WiFi 802.11 ac 4G / LTE Dual SIM USB-C
Tilmaamo kale Qalabka sawirka faraha ee lagu dhisay shaashadda NFC infrared iyo kaaliyaha badhanka
Batariga 3.300 mAh oo leh lacag degdeg ah
Cabbirada X x 157.5 74.67 7.61 mm
Peso Gram 173
Qiimaha Si loo xaqiijiyo
Xiaomi Mi 9-kan ayaa noogu imaanaya Samsung Super AMOLED guddi. Marka sumadda Shiinaha waxay u heellan tahay tayo, in kastoo tani ay kor u qaadi karto qiimaha aaladda si weyn. Waxay dooratay dhalaalka ilaa 600 oo nits, marka lagu daro haysashada Corning Gorilla Glass 6 aaladda. Nooca Shiinaha ayaa in badan ka faa'iideystay xagga hore ee taleefanka, tan iyo markii shaashaddiisu ay 90,7% ka tahay wejigan. Shaashad badan iyo qaan-garad caqli badan. Xaqiiqdii, geesaha si weyn ayaa loo dhimay. Astaantu waxay sheegaysaa in geeska hoose uu hoos u dhacay 40%.
Xiaomi Mi 9: Dhammaan heer sare
Maaddaama ay bilo ka faalloonaysay, Xiaomi Mi 9 waa taleefanka casriga ah ee ugu horreeya ee sumadda leh Snapdragon 855. Marka waxaan ka filan karnaa awood weyn aaladda dhanka howlgalka. Waxay sidaas sameysaa oo ay weheliso laba nooc oo RAM ah iyo keydinta, 6 iyo 8 GB oo RAM ah iyadoo kuxiran nooca iyo 128 iyo 256 GB oo keyd ah. Waxay u oggolaan doontaa dadka isticmaala inay doortaan nooca ay doonayaan.
Qalabka gadaashiisa waa shay abuuraya xiiso badan. Sababtoo ah qaabkani waa kii ugu horreeyay ee sumadda ah ee la yimaada kamarad gadaal saddex-laab ah. Marka taas wax badan ayaa laga filayaa iyada oo macno leh. Waxaan la kulannaa a 48 MP dareeraha, 16 MP kale oo muuqaal ah iyo kamarad leh telephoto optics iyo 12 MP sensor kaalinta saddexaad. Marka waxaa loo taagay inay tahay mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan arimahan Android.
Dareeraha faraha ayaa lagu dhex daray shaashadda. Xiaomi ayaa faallo ka bixisay in horumarin badan lagu sameeyay. Xaqiiqdii, kahor soo bandhigida, sumadda ayaa horeyba u shaacisay in dareeraha faraha ee Xiaomi Mi 9 uu ahaa kan ugu dhaqsaha badan suuqa. Waxay ku guuleysteen tan markii ay qabsadeen aag ballaaran oo shaashadda ah, kaas oo u oggolaanaya hawlgal wanaagsan.
Batariga taleefanka waa 3.300 Mah, ku filan marka lagu daro processor-ka. Sidii la filayay, waxay ku timaaddaa lacag degdeg ah. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale helnaa lacag-bixin wireless, markii ugu horreysay ee casriga casriga ah ee noocyadan Shiinaha ah. Dhinaca kale, Xiaomi Mi 9 horeyba wuxuu ula yimid Android Pie oo ay weheliso MIUI 10 oo ah lakab qaabeyn ah.
Qiimaha iyo helitaanka
Xiaomi Mi 9 ayaa horey loogu soo bandhigay Shiinaha. Marka waxaan haynaa qiimaha rasmiga ah ee qalabka Shiinaha. Xaqiiqdii Axadda qiimahooda Yurub waxaa lagu muujin doonaa soo bandhigiddooda MWC 2019. Laakiin, qiimaha Shiinaha waxaan ka heli karnaa fikrad ah waxa laga filayo aaladda.
Saddex nooc oo kala duwan oo qalabka ah ayaa na sugaya, ugu yaraan marka laga hadlayo Shiinaha. Qiimaha mid kasta oo ka mid ah noocyadan sare waa:
Nooca 6/64 GB waxaa lagu qiimeeyaa 2.499 yuan (326 euro in la beddelo)
Qaabka 8/128 GB wuxuu ku kici doonaa 2.899 yuan, oo qiyaastii ah 379 euros Isbedelka
Xiaomi Mi 9 oo leh 8/256 GB wuxuu ku kici doonaa 3.499 yuan (qiyaastii 457 euros Isbedelka)
In kasta oo waxa ugu caadiga ahi taas yihiin qiimaha aaladu wuu ka sareeyaa marka la soo saaro Yurub. Laakiin hadda ma ogin sida ay uga qaalisan yihiin qiimaha ay ku leeyihiin Shiinaha. Intaa waxaa dheer, soo bandhigiddeeda MWC 2019 waxaan ku ogaan doonnaa goorta laga bilaabi doono Yurub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi Mi 9 hadda waa rasmi: Nooca cusub ee sumadda leh
Xiaomi Mi 9 SE: Nooca cusub ee nooca dhexe ee dhexdhexaadka ah
Madadaalo iyo xatooyo aan caadi aheyn oo la leh Boost Buddies